दूर्जेय चेतना: मन र निदाएका बुध्द
Browse » Home » मनको कुरा » मन र निदाएका बुध्द
11 comments to “मन र निदाएका बुध्द”
सायद त्यै सिमा परिधि र रेखाङकनहरुको बन्धन नभएर होला मन आफ्नै स्वतन्त्रतामा अनेकौ कल्पना, सोच, पिडा, दर्द र महत्वकाङक्षाहरुको बिचमा लूकामारी खेल्दै कहिले सगरमाथाको शिखरमा पूगेर रमाउछ भने कहिले बुद्धको आँगनमा लडेर कराउछ तिनै निदाएका बुद्धबिच भएपनि । सपनाको रँगमञ्चमा आफूलाई दर्शक बनाएर उभिनु नै जिवनको पर्दा रहेछ दूर्जय जी ।
आगो लागेको छ, धुँवा निस्केको छ, आकासको निलो मैलिदैछ
र यस्तो पीडादायी रापमा पनि किन मन अनि आशाहरु जमिरहेका छन् ?
त्यो जमेको मन र आशाहरु जागृत गर्ने उपाय के होला?
त्यो सपनाको रंगमंचलाइ विपनामा उतार्ने र फेरी बुद्ध बोलाउने उपाय के होला ?
दुर्जेयजीको शान्तिको कथा सपनामा हैन बिपनामा देखिने दिन कहिले आउला?
बढो गम्भिर प्रसंग उठाउनु भएछ, शान्तिको कथा विपनामा आउला भनेर कुर्दा कुर्दै, उल्टै सपनामा पनि दुर्लभ होला जस्तो स्थितिले गाँज्दैछ हामीलाई ।
निकै गहन भाव राख्नुभयो! हाम्रो समय हिँसाको जालोमा नराम्ररी गाँजिएको छ। हिँसालाई यो वा त्यो नाममा महिमामण्डित गर्नेहरुको जगजगी छ। यो परिवेशको अन्त्य जरुरी छ। हामीलाई फेरि एउटा बुद्धको आवश्यकता छ।
सबै सत्य पाटो उतार्नु भयो दुर्जेय जी शायद हालको हाम्रो परिस्थितीलाई उतार्नु भयो खुशी लाग्यो, आगमी दिनहरुमा पनि यस्तै लेखहरु पढ्न पाउँ है।
'बुद्ध' त हैन यो वास्तवमा मान्छेको 'मन' निदाएर यस्तो भएको हो ।
बुद्द त बिचरा एक प्रतिक न हुन्... यो दिपक दाइले भने झैं वास्तवमा मान्छेको 'मन' निदाएर नै यस्तो भएको हो
सबै आशा र सपना बुद्धको ध्यानमग्न टाँसिएका आँखामै छोपिएर बसे जस्ता छन् । शान्ति र अमनचयनको काँचो भोक पर्खाइकै भटटीमा पोलिएर सकिएका छन् ।
तपाईँको चिन्तन र चिन्ता आजका मान्छे भएर बाँच्न चाहने मान्छेसँग हातेलामो गर्छन् दुर्जेय जी ।
मान्छेको मन निदाएको होइन । जसरी रातका ताराहरुको हत्त्या गर्दै पुरै डाडाकाडा रक्ताम्ये पारेर बिहानी उदाउछ तेसरीनै स्वर्थ जुर्मुराएर हम्रो मन उदाएको चै पक्कै हो।
कतै हामी एउटा काल्पनिक बुद्ध को खोजिमा आफुलाई नै त बिर्सेंनौ ?
हावा Hawa said...
Just clicked your blog for the first time...and read this post...
Man ko tarangit bhawana haru...dherai mazzale express garnu bha cha...padda paddai maan kaha kaha bahakiyo... dherai maan chune..bhawanatmak....post rahe6...maan ko buddha sachikai nidayeka hun ta ?